La hadal, u akhri una qor ilamahaaga maalin walba!
Home > Soomaali > Waxbaridda Dhallaanka Aminka Hure > La hadal, u akhri una qor ilamahaaga maalin walba!
Ilmahaagu wuu korayaa wuuna jecel yahay inuu wax barto. Isku day wax yaalahan fudud oo aad ku samayn karto gurigaaga.
Fiiri buugta. Laga bilaabo maalinta ilmuhu dhasho, ilma walbaaba wuu jecel yahay inuu wax akhriyo ama loo akhriyo. Ka hadal sawirada buugta ku yaala una ogolow inay su’aalo kaa waydiiyaan.
Su’aalo waydii. Ku dhiiri geli ilamahaaga inuu ka jawaabo su’aalaha ku saabsan wixii agaarkooda ka socda.
Tus xaruufta. Ku deji firinjeerkaaga ama talaagada xaruuf magnat leh kana caawi sidii ilmahaagu u isbeelin lahaa ama u higaadin lahaa kelmadaha gaagaaban sida (Mom, Dad, magacooda). Tus ilamahaaga boodhadhka xarfaha ku yaala una sheeg sida loogu dhawaaqo.
U ogolow inuu feegaro. Warqad iyo qalin sii ilmahaaga una sheeg inay kasoo qaadaan inay warqad u qorayaan qof xigtadooda ah kuna “saxeexaan” magacooda sawirana ku sameeyaan.
Aad laybareeriga. Laybareeriga xaafadaada u dhow ayaa kaa caawini sidii aad uga heli lahayd buugaag ilmahaagu jeclaysto -oo lacag la’aan ah! Laybareeriga waxa kale oo ay hayaan buugaagta oo cajal ah; ilamaagu isaga oo cajalka dhegaysanaya ayuu buugana kala soconayaa.
U akhri heesaha ciyaalka. Heesta kasta oo laxankeedua ay jecel yihiin kana caawi sidii ilmahaagu u baran lahaa dhawaaqista.
Samee boog. Isku laab si is leeg xaashi, sawirana kasoo jar magaasiinada, kuna dheji xaashida sidii buuga aad isugu laabtay, dabadeedna sheeko ka hadlaysa sawika samee ama mala awaal.
Waqti u samee TV-ga. Dooro barnaamajyo uu ilmahaagu wax ka baranayo. Ha u isticmaalin TV-ga inay ciyaalku kaaga mashquulaan. Ku dhiiri inay wax yaalo kale sameeyaan.
Shan Jirsan (High Five)
Baaritaanka Hore ee Caruurnimada
U Diyaar-garow Xanaanada Caruurta
5 waxyaalood oo kaa caawinaya sidii aad u dooran lahayd Cid caruurta kuu haysa